eTN Yakavanzika Policy | eTurboNews | Kufamba Nhau
musha » eTN Yakavanzika Policy
eTN Yakavanzika Policy
Maitiro Atinounganidza Ruzivo
eTN inounganidza ruzivo rwemunhu nenzira dzakasiyana siyana, kusanganisira paunonyoresa neTN pane ino webhusaiti, kana iwe uchinyorera kune eTN masevhisi kuburikidza ino webhusaiti, kana iwe uchishandisa zvigadzirwa zveTN kana masevhisi kuburikidza newebhusaiti, kana iwe uchishanyira eTN mawebhusaiti kana mawebhusaiti e vamwe eTN vadyidzani, uye kana iwe ukapinda muInternet-based promotions kana sweepstakes inotsigirwa kana kuitiswa neTN.
Paunonyora pawebhusaiti yedu, tinokumbira uye tinotora ruzivo rwakadai sezita rako, email kero, zip kodhi, uye indasitiri. Kune zvimwe zvigadzirwa nemasevhisi isu tinogona zvakare kukumbira yako kero uye ruzivo nezve iwe kana yako bhizinesi zvinhu kana mari. Ukangonyoresa neE eTN uye kusaina kumasevhisi edu, iwe hauzive zita kwatiri.
Vashandisi vanogona kusarudza kutora chikamu mumhando dzakasiyana dzeTN e-tsamba (email services), kubva panhau dzezuva nezuva kuenda kumutengesi anopisa specials. eTN inounganidza ruzivo rwemunhu maererano nekunyoreswa uye kushandiswa kwemasevhisi akadaro.
Vashandisi vanogona kusarudza kutora chikamu mukusimudzira uye / kana kukwikwidza kukwikwidza kunoitwa eTN nguva nenguva panzvimbo yevatengi vayo. eTN inounganidza ruzivo rwemunhu maererano nekunyoreswa kwevashandisi uye kutora chikamu mukusimudzira kwakadai nemakwikwi.
Zvirongwa Zvekudzidzisa neMisangano
Vashandisi vanogona kusarudza kutora chikamu muzvirongwa zvekudzidzisa uye misangano inoitwa neTN nguva nenguva. eTN inounganidza ruzivo rwemunhu maererano nekunyoreswa kwevashandisi uye kutora chikamu muzvirongwa zvakadaro.
"Cookies" zvidimbu zvemashoko zvinochengetwa nebrowser yako pane hard drive yekomputa yako. eTN kana vashambadziri vayo vanogona kutumira kuki kune komputa yako kuburikidza nebrowser yako. eTN inoshandisa makuki kuteedzera zvikumbiro zvepeji uye nguva yekushanya kwemumwe nemumwe mushandisi uye kushandiswa kwemakuki kunotibvumidza kupa browser yemushandisi neruzivo rwakanangana nezvinodiwa nemushanyi uye zvido uyezve kugadzirisa kushanya kwemushandisi kune webhusaiti yedu. Unogona kusarudza kubvuma makuki nekushandura marongero e browser yako. Unogona kuseta bhurawuza rako kuramba makuki ese kana kubvumira bhurawuza rako kukuratidza kana cookie iri kutumirwa. Kana iwe ukasarudza kusatambira makuki, ruzivo rwako pawebsite yedu uye mamwe mawebhusaiti anogona kuderedzwa uye zvimwe zvinhu zvingasashande sekufunga.
eTN otomatiki inogamuchira uye inorekodha ruzivo pane yedu dura matanda kubva kubhurawuza rako, kusanganisira yako IP kero, eTN kuki ruzivo, uye iyo peji rewebhu iwe raunokumbira. eTN inoshandisa iyi ruzivo kubatsira kuongorora matambudziko nemaseva edu, ehurongwa hwehutongi, uye kuongorora yedu webhusaiti traffic muhuwandu. Ruzivo urwu runogona kuunganidzwa uye kushandiswa kugadzirisa zviri mukati memapeji edu eWebhu uye kugadzirisa zvemukati uye / kana dhizaini yemumwe mushandisi.
Kana iwe uri kutenga chimwe chinhu kubva kune eTN webhusaiti, isu tinofanirwa kuziva isu pachedu ruzivo rwunozivikanwa sezita rako, email kero, kero yekutumira, kadhi rechikwereti nhamba, uye zuva rekupera. Izvi zvinotibvumidza isu kugadzirisa uye kuzadzisa odha yako uye kukuzivisa iwe nezve yako mamiriro mamiriro. Ruzivo urwu runogona zvakare kushandiswa neTN kukuzivisa iwe nezve zvinoenderana zvigadzirwa uye masevhisi. Kiredhiti kadhi ruzivo harugovaniswe kana kutengeswa kune vasina kubatana mapato echitatu nechinangwa chero chipi kunze kwemvumo yako yakajeka, kunze kwekunge zvichidikanwa kugadzirisa kutengeserana.
Kana iwe ukasarudza kutipa iwe pachako ruzivo, isu tinoshandisa iko kunyanya kuendesa sevhisi iwe yawakumbira. eTN inogona kushandisa ruzivo rwemunhu nenzira dzakasiyana kusanganisira zvinotevera:
o eTN inogona kushandisa ruzivo rwemunhu kuunganidzwa kuburikidza newebhusaiti yayo kutumira zvakanangwa kusimudzira email pachinzvimbo chevashambadziri uye vanobatirana navo mumaindastiri.
o eTN inogona kusanganisa ruzivo nezvewe isu rwatinayo neruzivo rwatinowana kubva kune vanobatirana navo bhizinesi kana mamwe makambani kuitira kuti zvirinani kuendesa zvigadzirwa nemasevhisi angave anonakidza uye anobatsira kwauri.
o eTN inogona kushandisa ruzivo rwemunhu wega kutaura nevashandisi maererano nekuvandudza kunyoreswa kune eTN masevhisi uye zvigadzirwa.
o eTN inogona kushandisa ruzivo rwunozivikanwa kuendesa ziviso yeeTN kana zvigadzirwa zvevatinoshanda navo nenzira dzakadai seemail uye / kana tsamba yepositi.
o Kana iwe uchipa ruzivo rwemari, isu tinoshandisa iyo ruzivo kunyanya kuongorora yako kiredhiti uye kutora mari yezvawakatenga, maodha, kunyorera, nezvimwe.
o eTN inogona kutumira zviziviso zvechigadzirwa kana yakasarudzika e-tsamba kune vanyoreri vepamhepo.
Kana iwe ukatora chikamu muEnm chirongwa chedzidzo, semina, kana chimwe chirongwa chinononoka nguva, tinogona kutaura newe kukuyeuchidza nezvemazuva ekupedzisira kana rumwe ruzivo pamusoro pezvirongwa izvi.
o eTN dzimwe nguva inoitisa vanyoreri uye / kana mushandisi kuongorora kuti zvirinani kunongedzera zvirimo kune vateereri vedu. Iyo yakaunganidzwa ruzivo rwunounganidzwa dzimwe nguva rwunogovaniswa nevashambadziri vedu, zvisinei, isu hatife takagovana chaiyo ruzivo rwemunhu neumwe wechitatu-bato.
o eTN inoshanda mawebhusaiti akati wandei iine zvemukati zvine chekuita nerwendo uye masevhisi. eTN inogona kugovana ruzivo rwevanhu rwakatorwa kubva kune vashandisi vemawebhusaiti ayo mukati meaya mawebhusaiti kuti vashande zvirinani vashandisi vayo.
eTN ine akawanda zvigadzirwa uye masevhisi uye nekudaro akawanda email uye kusimudzira zvinyorwa. Mukuyedza kubvumidza vashandisi kuti vagadzirise kutora kwavo mukana muTN masevhisi uye kukwidziridzwa, eTN inopa vashandisi mukana wekusarudza chaiwo marondedzero kana zvigadzirwa zvekufarira uye sarudzo dzekubuda-zvigadzirwa chigadzirwa uye kushandisa / rondedzero yakatarwa. Ese email kukwidziridzwa kwatumirwa kubva kuTN kunopa chinongedzo chekusarudza pazasi peemail zvichienderana nevashandisi vanogona kusarudza-kunze kwezvimwe zvigadzirwa uye kukwidziridzwa. Kana iwe ukatambira imwe yeaya maemail uye uchishuva kuzvinyoresa ndapota tevera rairo dzakapihwa mune yega email kana kutaurirana [email inodzivirirwa]
Nguva nenguva tinogona kushandisa ruzivo rwevatengi kune zvitsva, zvisingatarisirwe mashandisiro asina kumboburitswa muPamutemo Wekuvanzika. Kana ruzivo rwedu rwemaitiro rukachinja pane imwe nguva mune ramangwana tinotumira shanduko yemutemo kune yedu webhusaiti.
Kugovera Ruzivo Rwakaunganidzwa Nechitatu Mapato
Kazhinji, eTN hairende, kutengesa, kana kugovana ruzivo rwemunhu nezvako nevamwe vanhu kana makambani asina kugadziriswa kunze kwekupa zvigadzirwa kana masevhisi awakumbira, kana tiine mvumo yako, kana pasi pemamiriro anotevera:
Tinogona kupa ruzivo rwega pamusoro pevashandisi vedu kune vavanovimba navo uye vatengesi vanoshanda vakamiririra kana neTN pasi pekuvanzika uye zvibvumirano zvakafanana zvinorambidza mapato akadaro kuenderera mberi nekushandisa ruzivo. Aya makambani anogona kushandisa ruzivo rwako rwega kubatsira eTN kutaurirana newe nezve zvinopihwa kubva kuTN uye vedu vatinotengesa navo. Zvisinei, makambani aya haana kodzero yekuzvimiririra yekushandisa kana kugovana ruzivo urwu.
Paunonyoresa kuchirongwa chedzidzo, kukwikwidza, kana kumwe kusimudzira kunotsigirwa nechetatu, wechitatu anozopihwa ruzivo rwunozivikanwa wega kunze kwekunge zvatumirwa zvimwe zvine chekuita nekusimudzira.
o eTN inogona kubva nguva nenguva kugovana ruzivo rwevanhu senge maemail adhiresi nevanhu vechitatu vanovimbika vanounza zvemukati zvingangova zvekufadza mushandisi uye zvinoenderana nemvumo yekusarudza kubva kunhengo yechitatu yakadaro.
Tinogona kugovera ruzivo rwemunhu pachedu patinotenda nekutenda kwakanaka kuti chiito chakadaro chinodiwa kutevedzera nzira yekutonga, mutemo wedare, kana maitiro epamutemo anopihwa paTN, kana kumisikidza kana kushandisa kodzero dzedu dzepamutemo kana kudzivirira kuzvipomerwa zvemutemo.
Tinogona kugovera ruzivo rwakadai patinotenda zvakanaka kuti zvakafanira kuti tiongorore (kana kubatsira mukuferefetwa), kudzivirira, kana kutora matanho maererano nezviito zvisiri pamutemo, kufungidzirwa kubiridzira, mamiriro ezvinhu anosanganisira kutyisidzira kune kuchengetedzeka kwemuviri. yemunhu chero upi zvake, kutyorwa kwemitemo yekushandisa yeTN, kana sekumwe zvinodiwa nemutemo.
o Kana eTN yakawanikwa kana kusanganiswa neimwe kambani, isu tinotamisa ruzivo nezve iwe kune iyi imwe kambani zvine chekuita nekutora kana kubatanidzwa.
Email hurukuro mapoka anowanikwa kune vashandisi vedu pane mamwe mawebhusaiti edu. Vatori vechikamu vanofanirwa kuziva kuti ruzivo rwakaburitswa mune aya nhaurwa runyorwa rwunowanikwa kune vese nhengo uye nokudaro rwunova ruzivo rweveruzhinji. Tinokurudzira kuti uchenjere pakusarudza kuburitsa chero ruzivo rwemunhu wega mumapoka ehurukuro akadaro.
Iyi webhusaiti inotora matanho ekutengesa zvine hungwaru kuchengetedza ruzivo rwako. Patinotamisa uye nekugamuchira mamwe marudzi eruzivo ruzivo senge kiredhiti kadhi uye ruzivo rwekubhadhara, isu tinotungamidza zvakare vashandisi kune indasitiri standard SSL (Yakachengeteka Socket Layer) yakavharidzirwa maseva. Nekuda kweizvozvo, data rakaomarara raunotumira kune yedu webhusaiti senge kiredhiti kadhi uye ruzivo rwekubhadhara runotakurwa zvakachengeteka pamusoro peInternet.
eTN haina mhosva yekutyora chengetedzo kana chechero zviito zvevamwe vechitatu vanogamuchira ruzivo. eTN zvakare inobatanidza kune akasiyana siyana mamwe masayiti uye iine kushambadzira kwevechitatu mapato. Isu hatisi ivo vane chekuita nemitemo yavo yekuvanzika kana mabatiro avanoita ruzivo nezvevashandisi vavo.
Nezve Chakavanzika chevana
Iyi webhusaiti yeTN haina kuitirwa kuti ishandiswe nevana uye eTN haina kuunganidza ruzivo ichiziva kubva kuvana. Iwe unofanirwa kuve nemakore gumi nemasere kuti uwane kana kushandisa saiti ino.
Kwidziridza / Chinja Yako Dhata
Kugadzirisa email yako kero kana kushandura zvaunofarira zveemail ndapota nyorera [email inodzivirirwa]
eTN inochengetera kodzero, chero nguva uye pasina ziviso, kuwedzera kune, kuchinja, kugadzirisa kana kugadzirisa iyi Yakavanzika Policy, nekungotumira shanduko yakadaro, kugadzirisa kana kugadzirisa pawebhusaiti. Chero chero shanduko yakadaro, kumutsiridza kana kugadzirisa kuchashanda ipapo ipapo paunovhura pawebhusaiti. Vashandisi vanozoziviswa nezve shanduko kune ino Yakavanzika Policy kuburikidza ne "yakagadziridzwa seye" link pane iyo eTN webhusaiti.
Ndezvipi Zvimwe Zvandinofanira Kuziva Nezveangu Zvakavanzika Kana Ndiri PaInternet?
Ndokumbira utarise neavo vechitatu mawebhusaiti kuti uone yavo yekuvanzika mutemo. Kana eTN ichipinza zvemukati memumwe webhusaiti mune imwe yeiyo eTN mapeji ewebhu, eTN inoshandisa zvine mutsindo kuyedza vashandisi vedu kuti vabuda muTN inoshanda webhusaiti uye vari kupinda yechitatu bato inodzorwa webhusaiti. Vatengi / vashandisi vanofanirwa kuverenga nekunzwisisa chero hupamutemo hwakavanzika pane ese echitatu mapato webhusaiti.
Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti pese paunoburitsa pachena wega ruzivo rwepamhepo - semuenzaniso kuburikidza neemail, zvinyorwa zvekukurukurirana, kana kumwe kunhu - irwo ruzivo rwunogona kuunganidzwa uye kushandiswa nevamwe. Muchidimbu, kana iwe ukatumira ruzivo rwemunhu pamhepo runowanikwa kune veruzhinji, unogona kuwana mameseji asina kukumbirwa kubva kune mamwe mapato nekudzoka.
Pakupedzisira, iwe ndiwe wega une basa rekuchengetedza zvakavanzika zvemashoko ako ega. Ndokumbirawo muchenjere uye mutarisike pese pamunenge muri online.
Pasi pechirongwa chemutemo weCalifornia, mugari wemuCalifornia akapa ruzivo rwega kune bhizinesi raakagadzira hukama hwebhizimusi naye, hwemhuri, kana zvinangwa zvemumba ("California mutengi") ane kodzero yekukumbira ruzivo nezvekuti Bhizinesi rakazivisa ruzivo rwevanhu kune chero mapato echitatu kune echitatu mapato mapato ekushambadzira. Neimwe nzira, mutemo unopa kuti kana kambani iine bumbiro rezvekuvanzika iro rinopa sarudzo kana kusarudza-kusarudza kwemashoko ako ega nevechitatu nekuda kwekushambadzira, kambani inogona kukupa iwe ruzivo rwekuti ungashandise sei yako yekuzivisa sarudzo sarudzo.
Nekuti ino Saiti inoitirwa kuti ishandiswe pane bhizinesi-kune-bhizinesi hwaro, kupihwa kweCalifornia mutemo hakuzoshande, kazhinji, kune ruzivo rwakatorwa.
Kusvika padanho rekugara kweCalifornia achishandisa Saiti ino zvemunhu, zvemhuri, kana zvinangwa zvemumba zvinotsvaga ruzivo rwakafukidza mutemo, Saiti ino inokodzera imwe sarudzo. Sezvakataurwa muMutemo Wedu Wekuvanzika, vashandisi veSiti iyi vanogona kusarudza-kana kusarudza-kushandisa ruzivo rwewe pachako nevechitatu mapato. Naizvozvo, isu hatidiwe kuchengetedza kana kuburitsa rondedzero yevatatu vakagamuchira ruzivo rwako pachako mukati megore rapfuura nekuda kwekushambadzira. Kuti udzivise kuburitswa kwemashoko ako ega kuti ushandiswe mukushambadzira kwakananga nevechitatu, usasarudze-mukati mukushandisa kwakadai iwe paunopa ruzivo rwemunhu paSiti. Ndokumbira utarise kuti chero iwe paunopinda-mukati kuti ugamuchire ramangwana kutaurirana kubva kune wechitatu bato, ruzivo rwako runozoiswa pasi peyechitatu bato rezvekuvanzika. Kana iwe ukazofunga kuti haudi kuti wechitatu uyu ashandise ruzivo rwako, uchafanirwa kubata wechitatu zvakananga, sezvo isu tisina simba pamusoro pekuti vechitatu vanoshandisa sei ruzivo. Iwe unofanirwa kugara uchiongorora zvakavanzika zvechero bato rinounganidza ruzivo rwako kuti uone kuti iro sangano rinobata sei ruzivo rwako.
Vagari vemuCalifornia vanoshandisa ino Saiti zvemunhu, zvemhuri, kana zvinangwa zvemumba vanogona kukumbira rumwe ruzivo nezve kuterera kwedu mutemo uyu nekutumira e-mail [email inodzivirirwa] Iwe unofanirwa kuisa chirevo "Yako California Yakavanzika Kodzero" mune yenyaya ndima yeemail yako. Ndokumbira utarise kuti isu tinongodiwa chete kupindura chikumbiro chimwe chete pavatengi gore rega rega, uye isu hatifanirwe kupindura kune zvikumbiro zvinoitwa neimwe nzira kunze kweiyi email kero.
Chibvumirano chako kune ino Policy
Nekushandisa webhusaiti yedu, unobvumidza iko kuunganidzwa uye kushandiswa kweruzivo neTN sezvakatsanangurwa mudanho rino. Ndokumbirawo muone kuti mashandisiro enyu webhusaiti anotongwa neMitemo neMamiriro eTN. Kana iwe usingabvumirani nemitemo yeChinyorwa Chekuvanzika kana maMitemo neMamiriro, ndapota usashandise webhusaiti, zvigadzirwa uye / kana masevhisi.
Ndokumbira utumire chero mibvunzo nezve eTN's Chakavanzika Policy ku [email inodzivirirwa]
Ongorora: Smush haibatanidze nevashandisi vekupedzisira pawebhusaiti yako. Yese chete yekuisa sarudzo Smush anayo ndeyekunyora tsamba kunyorera kune saiti vanobvuma chete. Kana iwe uchida kuzivisa vashandisi vako nezveizvi mune yako yega yega, unogona kushandisa ruzivo pazasi.
Smush anotumira mifananidzo kumaseva eWPMU DEV kuti avashandise kuti vashandise webhu. Izvi zvinosanganisira kuendesa kweEXIF dhata. Iyo EXIF ​​dhata inogona kutorerwa kana kudzoserwa sezvazviri. Haina kuchengetwa pane maseva eWPMU DEV.
Smush anoshandisa yechitatu-bato email sevhisi (Drip) kutumira ruzivo maemail kune saiti maneja. Kero yeemail yemutungamiri inotumirwa kuDrop uye cookie inogadzirirwa neshumiro. Ruzivo rwevatungamiriri chete ndirwo runotorwa neDrip.
Fraport Boka Repakati Chirevo - Chekutanga Hafu 2021: Traffic Kudzoka Zvakajeka
Vatsvagiri vanoda kutanga kutsiva dutu remhepo rechamupupuri ne…
Vamwe ve una enda vanosvira choko pedzisa huya upinde twitter shinda marara uye gare gare dis
Pues Jungle Cruise ini ha gustado mushu
Kufamba Cruise Chikepe | Matipi Ekufamba | Nzvimbo dzekufambisa | Hotera Reserves #rt yako
Kwidziridzo Info Earthquake 8.00 km yeHi'onamoa Gulch (United States) - 3.09md / 33km…